Udokotela wakho wezinyawo
Inqubomgomo Yemfihlo & Amakhukhi
Imibuzo ejwayelekile: Ngabe isifo samathambo sivela ezinhlangothini zombili?
Isigaba: Wamathambo 0
Njengoba lesi sifo siqhubeka, izimpawu zivame ukusabalala ziye ezihlakaleni, emadolweni, emaqakaleni, endololwaneni, okhalweni nasemahlombe. Ezimweni eziningi, izimpawu zivela kumalunga afanayo nhlangothi zombili…
Impendulo enhle kakhulu: Uvimbela kanjani ukuthi uzwane ongakhuphukeli ekukhuphukeni?
Ingabe abagibeli bathola uzipho lwangaphakathi? Izicathulo zokuqwala amatshe zenzelwe ukulingana kahle, okuyilapho inkinga ivela khona. Uma ufaka unyawo lwakho esicathulweni…
Umpompi womgogodla uvame ukuthatha isikhathi esingakanani?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukubhoboza i-lumbar? Isigaxa sesigaxa sithatha cishe imizuzu engama-30 kuye kwengama-45, kepha kuzodingeka uhlale ulala phansi esibhedlela isikhathi…
Imibuzo ejwayelekile: Ungafakwa ngaphansi kwe-anesthesia ukuthola umpompi womgogodla?
I-anesthetic yendawo ijojowe emhlane wakho ophansi ukuze indikize indawo yokubhoboza ngaphambi kokuba kufakwe inaliti. I-anesthetic yendawo izokuhlaba okwesikhashana njengoba ijojowe….
Umbuzo wakho: Ingabe lukhona usizo lwezezimali kubantu abane-arthritis?
I-Patient Access Network Foundation inikeza ukwesekwa kwezezimali kubantu abane-RA, embozwe yi-Medicare, abadinga usizo lokukhokhela izindleko zokuphuma ephaketheni ezihlobene nemithi yokwelapha elungisa izifo eyishumi evunyelwe yi-FDA….
Ingabe ukushisa okomile kulungile nge-rheumatoid arthritis?
Ukushisa okumanzi, njengokugeza okushisayo, kungasiza ekungeneni kokushisa emisipheni futhi kunganikeza ukukhululeka kobuhlungu okungcono. Umhlinzeki wezempilo angancoma ukuthi omile…
Yini ebangela i-osteomyelitis engapheli?
Izimo eziningi ze-osteomyelitis zibangelwa yi-staphylococcus bacteria, izinhlobo zamagciwane ezivame ukutholakala esikhunjeni noma emakhaleni ngisho nabantu abaphilile. Amagciwane angangena…
Imibuzo ejwayelekile: Yiluphi uhlelo oluvikela ubuchopho nomgogodla?
Ama-meninges ulwelwesi olumboza futhi luvikele ubuchopho nomgogodla. Kunezigaba ezintathu zama-meninges: i-Dura mater, esondele kakhulu ethanjeni. I-Arachnoid, ethi…
Kwenzekani uma ungenayo i-tendon?
Uma ishiywe ingalashwa, ekugcineni ingaholela kwezinye izinkinga zezinyawo nezomlenze, njengokuvuvukala nobuhlungu emisipheni ematheni onyawo lwakho (plantar…
Upheka ingulube okhalweni ngemizuzu emingaki?
Kufanele ngipheke isikhathi esingakanani inyama yami yengulube noma eyosiwe yengulube? Umthetho wesithupha wenkomo yengulube ukuwapheka imizuzu engama-25 ngephawundi yenyama…
1 2 ... 6,772 Olandelayo
Sawubona, igama lami nginguMariya. Kubhulogi lami ngabelana ngezihloko ezithokozisayo ngomsebenzi wami - ngingudokotela wamathambo.
Umbuzo: Ingabe i-PRP ingayelapha i-arthritis?
Utiva ini uma une-osteoporosis?
Umbuzo wakho: Kwenzekani uma ngihamba kakhulu ngemuva kokushintshwa kwesinqe?
Umbuzo: Senzani isifo sokuqaqamba kwamalunga emzimbeni?
Ungakwazi yini ukugqoka amabhuzu ezinkomo ngomlenze wokufakelwa?
Ngabe i-UTI ingadala i-osteomyelitis?
Umbuzo wakho: Ingabe i-Ashwagandha ilungele i-osteoarthritis?
© 2021 Udokotela wakho wezinyawo
Oxhumana nabo | Mayelana NATHI | Inqubomgomo Yemfihlo & Amakhukhi
UKUNAKEKELWA KWABAPHATHI BAKWESOKUDLA! Zonke izinto zithunyelwa kusayithi kuphela ngenhloso yokwazisa nokufundisa! Uma ukholwa ukuthi ukuthunyelwa kwanoma yini ethile kwephula i-copyright yakho, qiniseka ukuthi usithinta ngefomu lokuxhumana futhi nezinto zakho zizosuswa!